Xagee ku dambeeyey khilaafkii Puntland iyo DFS xilli wasiiro ka socda Puntland ku sugan yihiin Muqdisho. – Puntland Post
Posted on August 15, 2019 August 15, 2019 by Gambool
Xagee ku dambeeyey khilaafkii Puntland iyo DFS xilli wasiiro ka socda Puntland ku sugan yihiin Muqdisho.
Kadib markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya madaxda dowladda federalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan golaha fulinta ayaa Puntland waxa ay hakad gelisey wadashaqaynta xukuumadda Soomaaliya.
Iyadoo ay taasi jirto ayaa shacabka Puntland iswaydiinayaan sababta keentay in weli ay wada shaqaynayaan qaar kamid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya iyo Puntland iyadoona ay hadda masuuliyiin katirsan Puntland shirar uga qaybgelayaan Baydhabo.
Wasiirka warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed (Sabarey), oo shir kaga qaybgalay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inuu weli taagan yahay khilaafka u dhexeeya labada dhinac haseyeeshee ay jiraan arrimo ka madax bannaan siyaasadda.
“Puntland kuma taalo jasiirad cidlo ah waxay kamid tahay jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya, waxyaabo laysku khilaafsan yahay waajiraan sida madaxweeynuhuba caddeeyey” ayuu yiri wasiirka warfaafinta Puntland oo la hadlay Idaacadda Garoowe.
Wasiir Sabarey oo sii wata hadalkiisa ayaa markale yiri,“Arrimaha gudaha, arrimaha dastuurka, qaybsiga khayraadka iyo deeqaha magaca Soomaaliya lagu helo arrimahaasi khilaaf baa ka taagan oo waad ogtihiin arrimaha kale ee aan siyaasadda shaqada ku lahayna waa soconayaan”.
Sheekh Daahir Aw-Cabdi: Cabdiraxmaan Cabdishakuurow! Diinta kuma jirtid ee ku soo noqo
Dhoobo-daareed oo u dhoofay magaalada Addis Ababa waddanka Ethiopia
Karaash oo Guddi kale u magacaabay gurmadka Gardafuu
Is the time ripe to review Puntland Public finances?
In Coup D’etat We Trusted
Federalism-bashing Finance Minister of Somalia
Italy Leads Relief Efforts for Flood Victims in Somalia